ऋतुहरूमा हाम्रा चाड- विचार - कान्तिपुर समाचार
ऋतुहरूमा हाम्रा चाड
कार्तिक २२, २०७५ सम्पादकीय
काठमाडौँ — हाम्रा सम्पदामा प्रकृति, पर्यावरण र मानव सभ्यताको सुमधुर मिलन भेटिन्छ । तिनका अंश पाइन्छन्, चाडपर्व तथा संस्कृतिमा । हरेक ऋतुका आफ्नै चालढाल छन्, आफ्नै चाड छन् । यी प्रकृतिपरक जात्रा र चाडपर्व हाम्रो सभ्यताका बिम्ब हुन् ।
ऋतुमध्ये शरद विशेष छ । न जाडो न गर्मी । रमाइलो, घमाइलो र पारिलो । थरीथरी फूल फुलेका । अनेक फल फलेका । बाली पाकेका । प्रकृतिको सौन्दर्य र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, दुवै आनन्द एकसाथ ।
मौसम र माहोल उत्सवमय । यही छेकोमा पर्छन्– दसैं, तिहार, म्ह: पूजा, छठ । दसैं सकिएको दुई साता बित्यो । तिहार मनाइरहेका छौं । छठ सामुन्ने छ ।
तिहार झिलिमिली छ । फूलको झिलिमिली प्रकृतिले दिएकी छन् । बत्तीको झिलिमिली हामीले थपेका छौं । घर, आँगन, चोक सिँगारेका छौं । आफ्नै मौलिक बाजा मादल घन्काउँछौ । त्यसकै तालमा देउसी–भैलो खेल्छौं ।
दाजुभाइ र दिदीबहिनी आत्मीयता बाँड्छौं । दीर्घायु कामना गर्छौैं । हरेक चाडमा किंवदन्ती जोडिन्छन् । यिनले केही सन्देश बोकेका छन् । तिहारसँग बलि राजाको दान महात्म्य जोडिएको छ ।
तिहार कार्तिक कृष्ण त्रयोदशीदेखि कार्तिक शुक्ल द्वितीयासम्म पाँच दिन मनाइन्छ । अर्थात् यमपञ्चक । पाँचै दिन बत्ती बालिन्छ । विशेष गरी लक्ष्मीपूजाको बेलुकी ।
यमपञ्चकका हरेक दिनको विशिष्ट अर्थ छ । पहिलो दिन कागको पूजा गरिन्छ । यमराजको सन्देशवाहक दूतका रूपमा पुजिने यो गुणकारी पन्छीले पर्यावरण सफासुग्घर राखेर हामीलाई सघाउँछ ।
दोस्रो दिन कुकुर पूजा । यमराजकै अर्को दूत मानिन्छ कुकुर । मानिसको सबैभन्दा पुरानो अर्थात् नवपाषाणयुगीन साथी । हाम्रो घरसम्पत्तिको भरपर्दो रखवाला । उसको यही योगदानको कदर गरिने दिन ।
तेस्रो दिन गाई तिहार । यस दिन धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको पूजा गरिन्छ । चौथो दिन गोरु– तिहार । हाम्रो परम्परागत कृषि–सहयोगीलाई सम्मान गर्ने अवसर । गाई–गोरुसँग संगतपछि नै मानिसले सिकारबाट जीवन चलाउनुपर्ने दिन सकिएका थिए । कृषियुग सुरु भएको थियो ।
यी चाडले हाम्रो सभ्यताचक्र पनि सम्झाइरहेका छन् । पुर्खाको संघर्ष र तिनका साथी–सहयात्री बिर्सन दिएका छैनन् । पाँचौं दिन भाइटीका । दाजुभाइ–दिदीबहिनीको आत्मीय पर्व । एकअर्कालाई टीका लगाइदिई सुस्वास्थ्य र दीर्घायु कामना गर्छन् ।
गोरुतिहारकै दिन गोवद्र्धन–पूजा पनि । हाम्रो मौलिक संवत्को नयाँ वर्षारम्भ । शासक होइन, सर्वसाधारणले चलाएको मानिने नेपाल संवत् । किंवदन्तीअनुसार विसं ९३७ मा शंखधर साख्वाले चलाएको संवत् । यसै दिन नेवारहरूको ‘म्हपूजा’ हुन्छ । आफ्नै शरीरको पूजा । आफ्नै अन्तरात्माको पूजा । आफैंभित्र हुन्छ देवता, आफैंभित्र दानव । आफ्नै अन्तरात्माभित्र हुन्छन् परमात्मा ।
म्हपूजा संस्कृति आफैंमा विशिष्ट छ । अद्वितीय पनि । चान्द्रमासमा आधारित नेपाल संवत् नेपाली संस्कृति तथा परम्परासँग भिजेको छ । नयाँ वर्षको पहिलो दिन आफ्नो शरीरको पूजा गर्नुको अर्थ विशिष्ट छ ।
नेपाल भाषामा म्हको अर्थ शरीर । मल्लकालतिर काठमाडौं उपत्यकाको यो आमपर्व थियो । त्यसबेला जो काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्थे, सबै यहाँको भाषा, संस्कृतिसँग नजिक हुन्थे । आफूलाई त्यसैअनुसार ढाल्थे ।
नेपाल संवत्का आधारमा लक्ष्मीपूजा वर्षको अन्तिम दिन । सालतमामी । व्यापारी–व्यवसायीका लागि व्यक्तिगत आर्थिक वर्ष अन्त्य हुने दिन । भोलिपल्ट नयाँ संवत् सुरु, नयाँ आर्थिक वर्ष ।
आजभोलि धेरै कारणले कतिले आफ्नो आर्थिक वर्ष फरक समयमा मनाउँछन् । केही अगाडिसम्म लक्ष्मीपूजाकै दिन सालतमामी गर्ने प्रचलन थियो । आजभोलि सांकेतिक रूपमा गरिन्छ ।
म्हपूजाको दिन बौद्ध नेवारले बुद्ध, धर्म र संघ, कुलदेवता तथा इष्ट देवताको पूजा गर्छन् । हिन्दु नेवारले बलि राजाको । दुवै पूजाको मूल आशय दान, शील र त्यागको भावना । मानिसले आफूलाई सबै प्राणीको हित र उद्धारमा लगाओस् भन्ने कामना ।
शरीर पूजाका क्रममा मण्डल बनाइन्छ । खेलुइता: बालिन्छ । हाम्रो जीवन पञ्चस्कन्ध र पञ्चतत्त्वले बनेको मानिन्छ । मानिस मृत्युपछि यही पृथ्वीमा विलीन हुन्छ । एक अर्थमा शून्यमा विलीन । मानिसको जीवन वास्तवमै शून्यजस्तै हो । मण्डल र खेलुइता: ले यही भाव प्रकट गरिरहेका हुन्छन् । खेलुइता: अर्थात् लामो बत्ती, अनुहारको लम्बाइबराबर । अनुहारले व्यक्तिको बाहिरी परिचय दिन्छ । खेलुइता: बाल्नुको अर्थ चारैतर्फ प्रकाश छर्न सक्नु हो । बलिसकेपछि यो खरानी हुन्छ । यसको अर्थ– हाम्रो शरीर पनि
एक दिन यसै गरी समाप्त हुन्छ । तसर्थ, आफूभित्रको लोभ,मोह, तृष्णा, लालसा त्यागेर सबै प्राणीको उद्धार गर्न सकौं भनेर म्हपूजा गरिन्छ ।
कार्तिक शुक्ल षष्ठीका दिन छठ मनाइन्छ । आस्था र सहअस्तित्वको पर्व । मधेसी समुदायले सघन रूपमा मनाउने यो पर्व अचेल प्राय: सबै मधेसवासीले मनाउँछन् । बिस्तारै पहाडमा पनि यसको रौनक बढ्दो छ ।
यो पर्वले मानव र प्रकृतिबीच हराउँदै गएको संवाद–सम्बन्धलाई कस्न सघाउँछ । नदी तथा पोखरीमा बसेर सूर्यको पूजा गरिन्छ ।
सूर्योपासनाको परम्परा ऋग्वैदिक हो । यसकै एउटा रूप छठ । सृष्टि, पालन र संहार तीनै क्षमता सूर्यमा छ । हाम्रो जिन्दगीलाई सिँगार्ने शक्ति पानीमा । तसर्थ पानीमा बसेर सूर्य पुज्नुको विशेष अर्थ छ । मानिस र प्रकृति भेटको ।
पर्यावरणका दृष्टिले पनि यसको महत्त्व छ । वर्षा ऋतुमा हिलाम्य बनेका जलाशय सफा गर्ने अवसर यसले दिन्छ । समावेशिता र सह–अस्तित्वको पर्व बनेको छ छठ । सबै जात, धर्म र क्षेत्रका मानिस सँगसँगै बसेर मनाउँछन् । यो एकता पर्वले पारस्परिक प्रेम, सद्भाव र सहअस्तित्व सिकाउँछ ।
यी चाड हामीलाई बढी सामाजिक बनाउने, सामुदायिक भावना विकास गर्ने, संस्कार र सभ्यतासम्मत तुल्याउने अवसर हुन् । ऋतुजन्य चरित्रका यी चाडले हामीलाई आफ्नोसहित सगोल र भूगोलको हित हेर्ने चाख दिइरहून् । सबैलाई हार्दिक शुभकामना ।
प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७५ ०९:४८
रैथाने लोकतन्त्रको झिल्को
जुन रैथाने लोकतन्त्रको झिल्को लोकपर्वका बेला झल्किन्छ, त्यो सबैका लागि, सधैंका लागि अनुकरणीय हुन्छ ।
कार्तिक २२, २०७५ चन्द्रकिशोर
काठमाडौँ — हिजो कात्तिक अमावास्याका दिन दीयाबाती (दीपावली) मनाइयो । दीयाबातीलाई सुकराती (सुखरात्रि) पनि भनिन्छ । यस दिन रातिको तेस्रो प्रहरमा मधेसतिर महिलाहरूले नाङ्गलो ठट्टाउँदै आफ्नो घरको परिक्रमा गर्छन् । यसक्रममा उनीहरू भन्छन्, ‘अन्नधन लक्ष्मी घर आऊ, दारिद्र बाहर जाऊ ।’ यसको आशय हुन्छ, ‘धन’ घरमा भित्रियोस्, गरिबी टाढा जाओस् ।
कतिपयले कात्तिक महिनाभरि आकाशदीप दान गर्ने गर्छन् । यसका लागि दीप बालेर एउटा अग्लो बाँसमा झुन्ड्याइने गरिन्छ । यी पर्वहरूको मौका छोपेर जुन उज्यालोको खोजी गरिन्छ, त्यो सुखको चाहना हो ।
छठ मधेसी पहिचानको पर्व हो । यसबाट जुन सांस्कृतिक पहिचान उदाएको छ, त्यसको कारण मुलुकभित्र मधेसको एउटा अलग चिनारी बनेको छ । छठ पर्व पछिल्ला केही दशकभित्र समावेशी लोकपर्वको रूपमा परिवर्तित हुँदै गएको छ । कुनै सरकारले सहयोग गरोस् वा नगरोस्, कति दिनको सार्वजनिक छुट्टी पाइयो, त्यसको पनि अर्थ छैन ।
कुनै गैरसरकारी संस्थाले सघाउ पुर्‍यायो कि पुर्‍याएन, त्यसको पनि कुनै वास्ता छैन । देहातदेखि सहरसम्म लाखौं मान्छे जलाशय र सडकको सफाइमा स्वस्फुर्त देखापर्छन् । छठ पर्व पोखरी वा नदीको किनारमा हुने भएको हुनाले त्यसको सरसफाइ गरिन्छ । मधेसी समाजमा प्रत्येक संस्कार पानीसंँग अभिन्न रूपमा जोडिएको छ । पानीसंँग जोडिने यो संस्कार कसैले सिकाएर सिकेको होइन । छठ पर्वको अवधिमा खुला आकाशमुनि सूर्यप्रति कृतज्ञता ज्ञापनका लागि सहज कृषि उत्पादन प्रसादको रूपमा चढाउनु नयाँ सिकाइ होइन ।
छठको पदचाप आउनै लाग्दा स्वच्छता र पवित्रताप्रतिको सजगता स्वस्फुर्त सुरु भइहाल्छ । यसका लागि कुनै सरकारी उर्दी जारी गरिएको हुँदैन । टोल–टोल, बस्ती–बस्तीबाट हजारौंको भिड विना कुनै प्रहरी, आफै अनुशासनबद्ध भई घाटमा गएर अघ्र्य दिन पुग्छन् । गाउँ–बस्तीवाट टाढा जलाशय किनारमा जाग्राम बस्छन् । र यो सबै चाँजोपाँजो समाजले आफै मिलाएको हुन्छ । यो लोकपर्व विना कुनै पुरोहित र कर्मकाण्ड सम्पन्न गरिन्छ ।
जलाशय किनारमा विना कुनै जातीय, धार्मिक, वर्गीय एवं लिङ्गीय विभेद एकै थलोमा प्रकृतिको आराधना गर्न पुग्छन् । यो जुन रैथाने लोकतन्त्रको झिल्को लोकपर्वका बेला झल्किन्छ, त्यो सबैका लागि सधैंका लागि अनुकरणीय हुन्छ । यो अनुकरणीय भएर नै होला, विना कुनै राज्यप्रश्रय यस पर्वले नेपाली समाजमा भूगोल र समुदायको सीमालाई उछिन्दै गएको छ । छठ समाजलाई जोड्ने माध्यमको रूपमा देखापर्दै गएको छ । गणतान्त्रिक समाजलाई जोड्ने केही परम्परा, संस्था र आधुनिक दृष्टि हुन्छ । त्यसमध्ये एक छठ पर्व देखिएको छ ।
छठले जुन समाजलाई परिचय दियो, त्यही समाजभित्र यो लोकपर्वसंँग जोडिएको सन्देश कुन रूपमा पिँmजिएको छ ? पर्वका बेला खासगरी मधेसी समाजमा देखिएको आफैभित्रको रचनात्मकता कति दिगो रहन्छ ? छठको पूर्वसन्ध्यामा जुन जागरुकता देखापर्छ, त्यो छठपछि कतिको कायम रहन्छ ? छठपछि पोखरी र नदी किनारमा हेरियो भने केराको थाम जथाभावी फालिएको, प्लाष्टिकका सामग्री छरपस्टिएको भेटिन्छ ।
जुन जलाशय र त्यसको किनारलाई एक दिनको लागि सफा गर्ने कोसिस गरियो, त्यो छठ सम्पन्न भएपछि फेरि त्यो दायित्वलाई बिर्सिन्छन् किन ? ह्वात्तै बढेको महँंगी र गुणस्तरहीन सामग्रीको बिक्रीलाई छठमा आस्था राख्नेहरूले कसरी स्वीकार्छन् ? यो प्रश्नको उत्तर यतिखेर खोज्नुपर्छ । आज मधेसको जुन छवि छ वा जुन सामुदायिक अकर्मण्यता छ, त्यसका लागि मधेसीजन जिम्मेवार छ । राज्यसँंग जोडिएका सवाल र त्यसैसँंग गाँसिएको उन्नतिको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध त छँदैछ, तर समुदायको आफ्नो पनि जिम्मेवारी हुन्छ । छठ पर्वलाई के सामुदायिक जागरण पर्वको रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिंँदैन ?
मधेसले आफ्नो प्राचीन संस्कृतिमाथि गर्व गर्न सक्छ । मधेसका प्रत्येक वासिन्दाले आफ्नो शानदार अतीतमाथि गौरव गर्न सक्छ र प्रेरणा लिन सक्छ । यो क्षेत्र सधैं जुझारु र गतिशील छ । यो सही हो कि लामो समयसम्म विकासका लागि संसाधन प्राप्त गर्नमा मधेसले पक्षपातको सामना गर्नुपरेको छ । केन्द्रले मधेसलाई आन्तरिक उपनिवेशको जस्तो व्यवहार गर्दैै आयो । यी कुरा भनिराख्दा मधेसले कतिपय सवालमा आफैले आफैतिर घोत्लिएर हेर्नु पर्नेछ ।
छठ पर्व यसका लागि उपयुक्त अवसर हुनसक्छ । भ्रष्टाचारको संकट, जातिवादीको उन्माद, उपभोक्तावादको मोह तथा अपराधीकरणको बढ्दो प्रवृत्तिले समाजलाई रोगग्रस्त गरिदिएको छ । जबसम्म यी व्याधिहरूको उन्मूलन गरिँदैन, तबसम्म समुचित सामाजिक एवं राजनीतिक वातावरण तयार हुँदैन । लोकतन्त्रको जरो मजबुत हुँदैन र आम नागरिकले सम्मानको जीवन जिउन पाउने मौलिक अधिकारको सुरक्षा हुँदैन ।
जबसम्म कुनै समाज स्वयंलाई नयाँ परिस्थिति अनुरूप आफूभित्र बदलाव ल्याउन सक्षम हुँदैन, तबसम्म विकासको प्रक्रिया प्रभावित हुँदै जान्छ । मधेसको सामाजिक तथा आर्थिक ढाँचा तुलनात्मक रूपमा कठोर छ । यसले गर्दा अन्य क्षेत्रमा हुने परिवर्तनलाई यसले सहजै स्वीकार गरिरहेको हुँदैन ।
मधेसका औसत व्यक्ति आफ्नो जीवन सामाजिक तथा पारिवारिक बाध्यताहरूमाझ विवाह, श्राद्ध, मुद्दामामिलाबाट सुरु गर्छ र त्यसैमा अल्झिरहन्छ । यस प्रक्रियामा ऊ केवल दायित्वको बहन गरिरहेको हुन्छ । यसले गर्दा आफैभित्रको उत्पादक सम्पत्ति सिर्जना गर्ने रचनात्मकताले ठाउँ नै पाउँदैन । त्यसैले सामाजिक जडताबाट उन्मुक्तिका लागि पनि राज्यका कानुनसंँगै यस्ता पर्वहरूको अभिन्न हिस्साको रूपमा सामाजिक सुधारलाई सामेल गर्न आवश्यक छ ।
मधेसमा उन्नतिलाई सामाजिक प्रश्न बनाउन केही साहसी कदम निश्चित रूपमा उठाउनैपर्छ । विभाजित सामाजिक बनावटलाई अविभाजित तथा विदेभरहित सामाजिक संरचनाको रूपमा विकसित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
‘विकास र उदारीकरण’ जस्ता शब्द नत कहिल्यै मधेसी समाजको राग बन्यो, न यसले तालमेल मिलाउन सक्यो । जुन नतिजा यी शब्दहरूको भ्रामक अर्थबाट बने, बन्दै आयो, त्यो स्थुल र खोक्रो थियो । मधेसको पछौटेपनलाई यसले झन गाँज्दै लग्यो । आज आवश्यकता छ, यी शब्दहरूको नतिजा बुझ्न र त्यस्तो खतरा जसले आफ्नो नयाँ संस्कृतिको गर्भबाट यस्तो व्यवहार सिकायो कि नदी, पोखरी र इनारहरू फोहोर गर्दै गइयो र पुर्दै गइयो ।
परिदृश्यमा एउटा तनाव देखियो– गाउँ र सहरबीच, खेती र उद्योगबीच, बञ्चित र बर्चस्वशालीबीच । पानीका स्रोतहरू सुक्दै जानुले पानीका निम्ति द्वन्द्व हुने स्थिति आयो । ‘पानी बजार’ अस्तित्वमा आयो । यो पानी बजारले नै पानीको लुटलाई मौलाएको छ । पानीको शोषण, प्रदूषण र अतिक्रमणकारी मानसिकताले मधेसको मूल पहिचानमाथि नै प्रहार गर्ने र संकट निम्त्याउँदैछ ।
मूलत: छठ पर्व पुर्खासँंगको संवादको प्रक्रिया हो । पुर्खाहरू जसले जलाशयहरूलाई निर्मल र अविरल राखिदिएका थिए । पुर्खाहरूले छठ पर्वलाई यसरी निरन्तरता दिए, जहाँ ग्रामीण अर्थतन्त्रले दिगोपना पाउँथ्यो र परस्पर सामुदायिक निर्भरतालाई अभिप्रेरित गथ्र्यो । यसकारणले नै होला, छठ पर्वले प्रकृतिको पूजा, नदी धर्म वा निर्मलताप्रतिको निष्ठाको रूपमा उपमा पाउँदै आएको छ । के हामी यो लोकपर्व फैलिँंदै गएको आत्मरतिमा यसका मूल भावलाई संँगाल्ने प्रयत्न गरिराखेका छौं ? मधेसी समाजमा फैलिँंदो जडता, गँुड बनाउँदै गएको बजारु आधुनिकता र देशज ज्ञानको उपेक्षाबाट आन्दोलित हुने र त्यसका लागि समर्पित जुर्मुराहट देखिनुपर्ने होइन र ?
मधेस जहाँ वर्षौंदेखि संघर्ष हुँदै आएको छ । अनेकौं प्रकारका रुढीवाद, वर्जना र उपेक्षाका सिकार हुँदै आएका मधेसीजनमा आफ्नो पराधीनताको यथार्थबारे गहिरो अनुभूति छ । समाज व्यवस्था भलै सामन्ती ढाँचा र सोचमा ढल्दै आएको भए पनि यससँंग जुध्ने तथा यसमा आफू हुनुको अर्थ खोज्ने तत्परता पनि देखिने गरेकै हो । अहिलेको हाँक भनेको त्यो तत्परतालाई फराकिलो बनाउँदै दिगोपना दिँदै जाने र त्यसलाई सामाजिकीकरणको स्वरूप प्रदान गर्ने हो । सुखप्रतिको चाहना अनि पो शाश्वत हुन्छ । छठलाई आरोग्य र उन्नतिदायक पर्वका रूपमा हेर्ने हो भने त्यो पर्यावरणीय र सामाजिक तन्दुरुस्तीको रूपमा प्रकट हुनुपर्छ ।
प्राय: कम खर्चिलो छठ पर्व जो आफू नसके भिक्षा मागेर पनि गर्न सकिने रीति छ । त्यसैले होला, कसैले पनि अरूसँंग माग्न असहज नमानुन्, त्यसका लागि कमसेकम ७ परिवारमा जोकोही व्रती परिवारले माग्नैपर्ने प्रावधान छ । तर यतिखेर विस्तारै बजारले छठ पर्वलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन थालेको छ । सादगी र सूचीताको यो लोकपर्व आफैमा एउटा ‘बजार’ हुँदै गएको छ । यसबाट नजोगाइए, यसले लोकपर्वको गरिमा थेग्न सक्दैन । नदीसंँग जनलाई जोड्ने, प्रकृतिसंँग लोकलाई जोड्ने, पर्यावरणसँग समुदायलाई जोड्ने यो लोकपर्व छठ शोषण र प्रदूषणमुक्त प्रकृतिलाई पोषण गर्ने पर्वका रूपमा देखापरोस् । यसले साँच्चिकै अर्थमा समृद्धि दिन्छ र त्यो नै सुख हुन्छ । प्राकृतिक पोषणविना जतिसुकै गरे पनि दारिद्रय भाग्दैन । नयाँ–नयाँ रूप र भेषमा त्यो घर, आँगन र खलिहानमा भौंतारिनै रहन्छ ।
प्रकाशित : कार्तिक २२, २०७५ ०९:४६